मन्त्रीमा मकवानपुरका ३ को चर्चा
११ साउन, हेटौँडा । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सरकार गठनका लागि आव्हान गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । नेपाली काँग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नामावली तयार गर्न व्यस्त छन् । केन्द्रमा नामावली तयार भईरहँदा मकवानपुरमा पनि नयाँ मन्त्री बन्नेमा ३ जनाको नाम चर्चामा छ । जिल्लाका राजनैतिक...
सुशासन समितिमा लोकमान अनुपस्थित
११ साउन, काठमाडौ । व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की अनुपस्थित भएका छन् । कार्की अस्वस्थताको कारण जनाउँदै समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् । समितिले काठमाडौ मेडिकल कलेजको स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेर...
'राजनैतिक दल जनमुखी हुनु जरुरी'
१० साउन, हेटौंडा । नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ सचिव एवम् नयाँ शक्ति नेपालका नेता रामेश्वर खनालले अवको राजनितिक पार्टी व्यवहारमा जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने जनमुखि प्रबृत्तिको हुनु पर्ने बताए । उनले डा. बाबुराम भट्टराई कार्यकालको विकास र विपि कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा २०१५ देखि २०१७ सालमा भएका विकासको बारेमा खुलेर प्रशंसा गरे...
तरुण दल हेटौंडा १ बिस्तार
१० साउन, हेटौंडा । नेपाल तरुण दल हेटौंडा वडा नं. १ सोमबार बिस्तार गरिएको छ । तरुण दल वडा अध्यक्ष विकेशलाल श्रेष्ठको सभाध्यक्षता तथा नेपाली काँग्रेस पार्टी वडा इकाई समिति सभापति हरिकृष्ण महर्जनको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको भेलाले पहिलो चरणमा सात सदस्यीय समिति विस्तार गरेको हो । समितिमा उपाध्यक्ष दिनेश लामा, सचिव एदिस रिजाल,...
१० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरे बमोजिम सोमबार बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरे अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ३...
१६ औं दिन केसीले अनसन तोडे
१० साउन, काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै अनसनमा बसेको १६ औं दिनमा डा. गोविन्द केसीले सोमबार अनसन तोडेका छन् । सरकारी वार्ता टोली र उनीबीच आइतबार साँझ सहमति भएपछि केसीले अनसन तोडेका हुन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत बिरामी सरोज नेपाली र छेवाङनोर्गु लामाले जुस खुवाएर सोमबार केसीको अनसन तोडाएका छन् । अनसन तोडेसँगै...
बन्दको मकवानपुरमा पनि प्रभाव
१० साउन, हेटौँडा । नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले आव्हान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव मकवानपुरमा पनि परेको छ । बन्दका कारण मकवानपुरको पूर्वपश्चिम राजमार्ग, त्रिभुवनराजपथ, कान्तिराजपथ, मदनभण्डारी मार्ग लगायतका सडकमा सवारी साधान गुडेका छैनन् । मकवानपुरको सदरमुकाम हेटौँडा बजारका पसल पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन् । औद्योगिक...
अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्नु परेन
९ साउन काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले राजिनामा दिएसँगै व्यवस्थापिका संसद बैठक मंगलबार विहान ११ बजेसमम्का लागि स्थगित भएको छ । आइतबार नै १५ मिनेट स्थगित भएर पुनः शुरु भएको संसद बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तिले प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा स्विकृत गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाएकी थिईन् । पत्र पढेसँगै उनले...
९ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा आफुविरुद्ध पेश भएको अविश्वासको जवाफ दिने क्रममा आइतबार साँझ ओलीले आफुले पदबाट राजिनामा दिएको जानकारी दिएका हुन् । सम्बोधनको अन्तिममा ओलीले संसदमा आउनु अघि आफुले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष राजिनामा पेश गरिसकेको सदनलाई...